တရုတ် Richina - မေးလ်အမိန့်အဘို့အသံမဏိနှင်း Pusher
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: HT461
ဦးခေါင်းပစ္စည်း: ပလတ်စတစ်, ကာဗွန်သံမဏိ
လျှောက်လွှာ: နှင်းရေမှုတ်များ, ဥယျာဉ်ရေမှုတ်များ, စိုက်ပျိုးရေးရေမှုတ်များ
အရောင်: Black က, အခြား
ဦးခေါင်းအရွယ်အစား: * 230mm 460
ထုပ်ပိုး: 1pcs / ctn
သံမဏိ နှင်း Pusher
နှင်း pusher ခြုံငုံအရှည် 1300mm
အမှုန့် coated ကာဗွန်သံမဏိဦးခေါင်း, အရွယ်အစား 460 * 260mm နှင့်အတူဆီးနှင်း pusher
အဆင်ပြေ D-ပုံသဏ္ဍာန်ချုပ်ကိုင်နှင့်အတူအမှုန့် coated သံမဏိလက်ကိုင်
ဝက်အူများကချိတ်ဆက်နှင်း pusher လက်ကိုင်နှင့်ဦးခေါင်းကို
20 နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံပြီးကျွန်တော်အမျိုးမျိုးတို့ကိုအတွက်အထူးပြုများမှာ နှင်း Tools များ နှင်းရေမှုတ်များ, အပါအဝင် နှင်း Pusher ့နှင်း Rakces, နဲ့ Snow ခြစ်။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အဓိကအားဖြင့်အမေရိကန်, ကနေဒါ, ဥရောပတင်ပို့နေကြသည်။ OEM / လိမ္မော်ရောင်အမိန့်ကိုကြိုဆိုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုလူအပေါင်းတို့သည်အလွန်ကောင်းစွာထုတ်ကုန်ကိုသိပြီးနောက်, သူတို့ကအလွန်လျင်မြန်သငျသညျတုံ့ပြန်ချက်ပေးနှင့် professinal ဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးနိုင်ပါသည်
Looking for ideal Steel Blade နှင်း Pusher Manufacturer & supplier ? We haveawide selection at great prices to help you get creative. All the Snow Pusher for Mail Order are quality guaranteed. We are China Origin Factory of လက်စွဲစာအုပ်နှင်း Pusher ။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရပါ။
Anoxided လူမီနီယမ်နှင်း Pusher
foldable နှင်း Pusher
အကြီးစား Duty နှင်း Pusher
Long ကလက်ကိုင် ခေါင်မိုးနှင်း Pusher
Mini ကိုနှင်း Pusher
Multifounctional မော်တော်ကား နှင်း Pusher
Multifounctional foldable နှင်း Pusher
PP ပလတ်စတစ်နှင်း Pusher
Rolling နှင်း Pusher
ဘီးနှင့်အတူ Rolling နှင်း Pusher
နှင်း Pusher Blade ကို
နှင်းဖယ်ရှားရေး / နှင်း Pusher
wheel နှင်း Pusher
20 လက်မ Poly နှင်း Pusher ရေမှုတ်များ
တယ်လီစကုပ်လူမီနီယမ် foldable နှင်းရေမှုတ်များကိုငျတှယျ
: D ပုံသဏ္ဍာန်ချုပ်ကိုင်နှင့်အတူ Ergonomics နှင်းရေမှုတ်များ Pusher